Halkuu ku dambeyn doonaa khilaafka Jubaland iyo dowladda federaalka? - BBC News Somali
Khilaafkan ayaa dhinaca kale wiiqay xiriirkii dowladaha Kenya iyo Itoobiya, gaar ahaan wadashaqeyntooda dhinaca milatariga ee qeybta ah howlgalka midowga Africa ee Soomaaliya(AMISOM)
1- Maxaa ka dhacay Jubbaland?
Image caption Beesha caalamka ayaa Jubbaland ugu baaqeysay in ay fuliso doorasho xor iyo xalaal ah
2- Sidee looga fal celiyay?
3- Waa kuwee 'madaxweyneyaasha' iskood isku magacaabay?
5- Maxay Jubbaland muhiim u tahay?
6- Maxaa laga yaabaa inay xigaan?
Image caption Axmed Madoobe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal